Ọhụrụ smartphones ọhụrụ sitere na Huawei na Honor nata EMUI 9.1 | Gam akporosis
Naanị awa ole na ole gara aga, anyị na-edekọ ihe ndị ahụ Akụkọ na Huawei Mate X ga-egosi, nke gụnyere, dị ka ndị protagonists, ụlọ ọrụ Kirin ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na sistemụ foto dị ike karịa nke anyị na-ahụ na P30 usoro ugbu a. Ekwuru na ngwaọrụ a na-eji otu SoC eme ihe dika agbarịta 30, nakwa na ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya na ahịa.
Mana nke a abụghị oge iji lekwasị anya na ekwentị mkpanaka a, kama na mmelite ọhụrụ nke Huawei na-ahapụ ọtụtụ ụdị ya (asatọ, nke ziri ezi). Firmlọ ọrụ ahụ nọ na-enye ngwugwu ngwa ngwa ahụ nwere EMUI 9.1 ruo n'ọtụtụ njedebe nke ngwụcha ya n'oge na-adịbeghị anya, mana ndị anyị na-ekwu maka ha ugbu a ekwesighi ya, rue ugbu a. Akụkọ a gunyere na os emere ọhụrụ dị oke mma, ma GPU Turbo 3.0 algorithm na sistemụ faịlụ EROFS bụ ndị na-apụta ìhè.
Na nkowa, ụdị asatọ ndị ritere uru ugbu a na OTA bụ ndị a: Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Nwunye 9 Porsche Design, Huawei P10, P10 Plus, Nova 2S, Honor 9 na Honor V9. Dị ka ị nwere ike ịchọpụtala, anyị na-arụ ọrụ arụmọrụ dị elu site n'ọgbọ ndị gara aga. Abụọ ndị mbụ akpọrọ, dịka ọmụmaatụ, ebubere na njedebe nke 2016, ebe ama ndị ama ama ama ama ama ama ama ama ama na July na February 2017.
EMUI 9.1 ruru ekwentị asatọ ọzọ
Ọ bụrụ na ịmaghị, GPU Turbo teknụzụ bụ nke onye nrụpụta China nke na-eme ka arụmọrụ na mmiri dị mma mgbe ị na-egwu egwuregwu, site na igbochi ọrụ na usoro ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, sistemụ EROFS (Extendable Read-Only File System) sistemụ na-enye ohere ka ngwa ngwa rụọ ngwa ngwa. Nke ikpeazụ a nọchiri faịlụ faịlụ F2FS ma weta mmụba 20% na ọsọ ọgụgụ aghara aghara na ọbụlagodi ịhapụ gị ohere karịa na ngwaọrụ gị.
Mmelite ngwanrọ dị ugbu a maka naanị ọnụ ọnụ Chinka. A ga-enye ya n'ókèala na mba ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya, yabụ ị nwere ike ichere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Smartphonedị smartphone ekwentị Huawei asatọ natara EMUI 9.1 na GPU Turbo 3.0 na faịlụ EROFS
Casio PRO TREK WSD-F21HR: Egwuregwu egwuregwu ọhụụ na Wear OS